Le ayisiyomfihlelo kaMnu Wonderful: Uhlobo lwayo lwantlandlolo. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Akukho mfihlakalo kaMnu Wonderful: typography yakhe
UJose Angel | | Ezahlukeneyo
Malunga brand kwidayari kunye nezinye izinto, ilogo ngokugqwesa kwezona zipho ziqhelekileyo phakathi kwabahlobo, kukho ukuthandabuza kubasebenzisi abaninzi ababuza kwi-Intanethi. Ukusuka kuyilo sifuna ukusombulula la mathandabuzo kwabangenakukwazi. Kwaye yile, Mnu Wonderful akahlukanga okanye akhethekanga kuhlobo lwayo. Ewe uyayazi indlela yokuyiguqula kwaye ayisebenzise ngamandla amakhulu.
Kwaye ilogo yayo ilula kakhulu, uhlobo lochwethezo. Ewe ewe, eminye imibala kunye neemilo ezincinci, kodwa ayisiyonto yakhe yomeleleyo. Umahluko ngokusisiseko yileta. Ukusuka kwileta nabani na kuthi abone ukuba imbi kakhulu, wenze umqondiso. Kwaye ukwazile ukuphakamisa amanqaku akhe kwisalathiso solu hlobo lwamanqaku. Ukuba ixabiso lamanqaku abo alikho lincinci (nangenxa yomgangatho wemveliso, ewe) uninzi lolutsha olunayo i-ajenda yezikolo zazo.
1 Mnu Wonderful ngu ...
2 Ezinye iintlobo zeeleta ezisetyenziswe kuMnu Wonderful
Mnu Wonderful ngu ...
Ifonti ayisebenzisayo ayibizwa ngokuba nguMnumzana Wonderful, mhlawumbi, unqwenela uninzi xa uyikhangela ngegoogle. Le inegama Arsenale umhlophe. Ileta yasimahla yokusetyenziswa buqu, inelayisensi phantsi komgaqo wokuyila, kodwa hayi eyokusetyenziselwa urhwebo.
Ndicinga ukuba uphawu luya kuhlawula amalungelo kolu hlobo lohlobo kunye nabanye abalusebenzisayo. Kungenxa yokuba amanene ka MR. Umangalisayo awusebenzisi lowo kuphela, nangona ingulowo ubachazayo. Ukuba akunjalo, iimveliso ziya kuba zithandeka kakhulu. Basebenzisa iintlobo ezahlukeneyo kodwa ezifanayo kwimisebenzi yabo eyahlukeneyo. Ngale nto bafumana umnxeba omtsha kumfanekiso wabo kodwa ngaphandle kokuphulukana nobuntu babo.
Ezinye iintlobo zeeleta ezisetyenziswe kuMnu Wonderful
Njengoko besitshilo, awusebenzisi uArsenale White kuphela. Uninzi lwemithombo yayo ikhathalogu njenge "Kubhalwe ngesandla" okanye ukuBhala ngesandla ngesiNgesi (ebekwayinto enye). Ewe kunjalo, basebenzisa iintlobo zoomatshini, kodwa eyona nto itsala umdla woluntu zezo zemanyuwali, zezona zibalaselisa uphawu. Kwaye siza kubonisa ezo sizifumene kwi-intanethi.
Njengoko uza kubona, amakhonkco okhuphelo avela kumaphepha angaphandle, akukho nzima ukuwafumana, ukuba sisele sinye, ngokuqinisekileyo uya kufumana ngokulula. Enye yeefonti abaza kuzisebenzisa kwiimveliso zabo ezininzi zezi: Intyatyambo yobuchopho.
Ifonti yasimahla ngokulinganayo yokungasetyenziselwa urhwebo. Kodwa ukuba ufuna ukwenza inzuzo ngayo. Umbhali wayo akayekanga apho kwaye wenze amazwi amnandi kakhulu awashiyileyo abonakala kwiwebhusayithi yakhe kweli candelo: Imithombo
Lo mthombo ulandelayo ubizwa ngokuba:Windsor. Ngethamsanqa kuye wonke umntu ngoku, le yileta isimahla nakuphi na ukusetyenziswa. Ewe umbhali ulahla ukuba kukho iminikelo, ke ngoko, ukuba uza kufumana imbuyekezo yezoqoqosho, kuya kuba kufanelekile ukuba wenze umnikelo omncinci ngomsebenzi wakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Akukho mfihlakalo kaMnu Wonderful: typography yakhe